Nezvedu - Yuyao World Moto Kurwisa Midziyo Fekitori
Yuyao World Moto Kurwisa Midziyo Fekitoriinyanzvi dhizaini, kugadzira mugadziri uye kunze kwenyika bronze nendarira mavharuvhu, flange, pombi yakakodzera Hardware epurasitiki zvikamu nezvimwewo. Isu tiri muYuyao County muZhejiang, Abuts inopesana neShanghai, Hangzhou, Ningbo, kune nharaunda dzinoyevedza uye nyore kutakura.
Tinogona kupa chokudzimisa vharuvhu, hydrant, pfapfaidzo kamwene, coupling, gedhi mavharuvhu, cheki mavharuvhu uye bhora mavharuvhu. Isu tinogadzira zvese izvi zvigadzirwa, zvakanyatsoenderana neAPI, JIS uye BS zviyero. Zvese zvigadzirwa zvedu zvinoenderana nemhando yepamusoro yemhando uye zvinokosheswa mumisika dzakasiyana siyana pasirese. Fekitori yedu iri kufukidza nharaunda ye8000 spuare metres, isu ikozvino tave nevashandi vanopfuura makumi matatu nematatu. Zvivakwa zvedu zvakanaka-zvine epuipiki uye yakanakisa kudzora kwemhando mumatanho ese ekugadzira zvinotigonesa kuvimbisa kugutsikana kwevatengi. Nekuda kwezvinhu zvedu zvemhando yepamusoro-soro uye nebasa rakakosha revatengi, isu takawana yepasi rese yekutengesa network kusvika kuNorth America, South America, Asia, Middle East, Europe.
Kambani yedu inogara iri mukutenda: kutendeseka ndiko hwaro hwebhizinesi, kuvimbika kuri mukushomeka kwekushandira, kutora mutengi kuve iko kwekutarisa, nezve mhando sehupenyu. lf uchifarira chero zvigadzirwa zvedu, tapota nyorera nesu. Tiri kutarisira kuumba hukama hwebhizinesi hwakabudirira nevatengi vatsva pasirese munguva pfupi iri kutevera.